एचआइभी संक्रमितले बुझेनन् एआरटीको महत्व - Image Khabar
एचआइभी संक्रमितले बुझेनन् एआरटीको महत्व
प्रकाशित मिति : 22 November, 2019 3:28 pm
डोटी, मंसिर ६ । जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाकी धनसरा विक वि.सं २०६३ देखि एचआइभी सङ्क्रमितहरुले सेवन गर्ने एआरटी प्रयोगकर्ता हुन्, तर विगत केही महिनादेखि उनी औषधि सेवन गरिरहेकी छैनन् ।
धनसराजस्तै अन्य सङ्क्रमितले पनि औषधि सेवन गर्न आनाकानी गर्ने गर्छन् । “स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि लिएर जान्छन् तर घरमा लगेर थन्क्याइदिन्छन्”, सङ्क्रमित कमला मल्लले भन्छीन्, “एक सङ्क्रमित महिलाले २४ महिनासम्मको औषधि घरमै थन्क्याएको पाइयो ।” औषधि सेवन नगरेकै कारण ती महिलाको छिट्टै मृत्यु हुने कमलाको दाबी छ ।
वि.सं २०६२ मा पहिलोपटक आफू एचआइभी सङ्क्रमित भएको भन्दै खुलेकी कमला मल्लले भनिन्, “कयौँ सङ्क्रमितको औषधि सेवन गर्दागर्दै मृत्यु भएको हुँदा पनि औषधि खाएर केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको छ, त्यसैले उनीहरु औषधि सेवन गर्दैनन् ।”
पछिल्लो समयमा यस्तो समस्या देखिएको जिल्ला अस्पताल डोटीका डा. गिरीष अवस्थी बताउछन् । “लगातार औषधि खाएपछि कमजोर भइन्छ भन्ने एचआइभी सङ्क्रमितमा मानसिकता रहेको पाइयो”, डा. अवस्थीले भने, “लगातार औषधिको सेवन गर्न झण्झट मान्ने रहेछन् ।” जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल सुपरीडेन्टेन्ट डा. भुषण मिश्रले सङ्क्रमितलाई एआरटीको महत्वबारे जानकारी नभएका कारण उनीहरुले बीचमै औषधि सेवन गर्न छाड्ने बताउछन् ।
“लगातार औषधि खाँदा ‘साइड इफेक्ट’ हुन्छ भन्ने बुझाइ एचआइभी सङ्क्रमितमा रहेको छ”, डा. मिश्र भन्छन्, “तर एआरटी सेवन नगरे छिट्टै मृत्युको मुखमा पुगिन्छ भन्ने कुरा बुझेका छैनन् ।” डोटी जिल्लामा एआरटी सेवन गरिरहेकामध्ये २३ सम्पर्कविहीन रहेको जिल्ला अस्पतालका एआरटी शाखाका प्राविधिक कमल रेग्मीले बताए ।
जिल्ला अस्पताल डोटीबाट एआरटी सेवन गरिरहेका कूल ७ सय ६४ सङ्क्रमितमध्ये हालसम्म १ सय ५१ को मृत्यु भइसकेको रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ६० जनालाई जिल्ला बाहिर सिफारिस गरिएको छ । जिल्लामा रहेका अधिकांश स्थानीयवासी कामका लागि भारत जाने तथा त्यहाँ उनीहरुले गर्ने असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण जिल्लामा एचआइभी बढ्न थालेको छ ।
एचआइभी सङ्क्रमितबाट जन्मेका अधिकांश बालबालिकामा समेत एआइभी देखिएको जिल्ला अस्पताल डोटीको तत्थ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समय जिल्लामा एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको जिल्लामा एचआइभीको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको दाबी छ । रासस
राजेश हमालले भने: दिपाश्रीलाई माफी दिनुहोला
जब काठमाडौंमा राष्ट्रियताको नारा घन्किन्छ, सीमाका नागरिकमाथि भारतीय सेनाको ज्याजती बढ्छ
अवैधरुपमा कोरोना परीक्षण गरी शुल्क लिएका अस्पतालहरुको छानबिन गरिने
काठमाडौं, असार ३० । अनुमति नै नलिइकन अवैधरुपमा कोरोना परीक्षण गरी शुल्क लिएका अस्पतालहरुको सरकारले
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नमूना बनाउँछु : स्वास्थ्य मन्त्री
काठमाडौं, असार २९ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालयलाई पुनर्संचनासहित नमूना बनाउने बताउनुभएको छ
कोभिड–१९ मा विश्वभरका स्वास्थ्यकर्मीमाथि बोली बन्द गराउनेसम्मको ज्यादती भयोः एम्नेष्टी इन्टरनेशनल
काठमाडौं, असार २९ । कोरोना भाइरसको कहरका समयमा विश्वभर स्वास्थ्यकर्मीहरूको बोली बन्द गराउने, जोखिममा पार्ने
सुर्खेत, असार २९ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको एक थुनुवाका कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि हिरासत
काठमाडौं उपत्यकामा थप ९ जना कोरोना संक्रमित
काठमाडौं, असार २९ । काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार थप ९ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।